Waqtiga Dheeraadka: mabda '
Waqti dheeri ah waa saacadaha la shaqeeyey ee ka baxsan waqtiga shaqada sharciga ah ee 35 saacadood (ama waqti loo arko mid u dhiganta) shaqaale waqti buuxa ah.
Waqtiga dheeriga ah wuxuu keenaa kordhinta mushaharka. Kordhintaan waxaa bixiya heshiis shirkadeed ama, haddii taa la waayo, waxaa lagu heshiiyey laanta. Heshiiska shirkaddu wuxuu ka hor marinayaa heshiiska laanta. Heerarka calaamadeynta kama yaraan karaan 10%.
Maqnaanshaha heshiiska qandaraaska, saacadaha dheeraadka ah waxay keenaysaa kordhinta mushaharka:
25% 8da saacadood ee ugu horeeya waqtiga dheeriga ah; 50% saacadaha soo socda. Waqtiga-dheeriga: kaliya ma keenaan mushahar qaali ah
Waqtiga dheeriga ah wuxuu keenaa xaq u lahaanshaha kordhinta mushaharka ama, meeshii ay khuseyso, nasasho u dhiganta oo u dhiganta (Xeerka Shaqada, farshaxanka L. 3121-28).
Liiska mushaharku wuxuu sheegayaa tirada saacadaha shaqada ee mushaharku la xiriiro. Haddii shaqaaluhu shaqeeyo saacado dheeraad ah, waa inaad ku kala saartaa liiskiisa mushaarka saacadaha lagu bixiyo heerka caadiga ah iyo kuwa ay ku jiraan kordhinta waqtiga dheeriga ah (Xeerka Shaqada, farshaxanka, R. 3243-1).
Lacagta caymiska ma bixinayso
Ku bixinta saacadaha dheeriga ah ee lacagta caymiska waa fikrad xun July 8th, 2021Tranquillus
READ Abuur goob oo ku iibso tababarkaaga khadka tooska ah 'Podia'
horeCDD oo ku sii socota CDI: ma la siiyaa gunnada khatarta ah?
socdaKala guur wadareed: koorsada tababarka cusub ee lagu saadaalinayo laguna taageerayo dib u tababarida shaqaalahaaga